विश्वकपमा १४ खेल सकिए, सम्पूर्ण खेलको नतिजा सहितकाे जानकारी
काठमाडौं । सोमबार राति इंग्ल्यान्डले ट्यूनिसियालाई पराजित गरेसँगै जुन १४ बाट सुरु भएको रसिया विश्वकपमा १४ खेल सकिएका छन् । १४ खेलमा हालसम्म ३२ गोल भएका छन् भने गोल रहित बराबरीमा कुनै पनि खेल सकिएको छैन ।
विश्वकपमा आज ३ खेलहरु हुँदै, कुन खेल कति बजे ?
काठमाडौं । विश्वकपको पाँचौ दिन आज ३ खेलहरु हुँदैछन् । आज समूह 'एफ'को १ तथा समूह 'जी'का दुई खेलहरु हुन लागेको हो ।
डिफेन्डिङ च्याम्पियन जमर्नी बलियो प्रतिद्धन्द्धी मेक्सीकोसँग भिड्दै
काठमाडौं । आज हुने विश्वकपको दोस्रो खेल डिफेन्डिङ च्याम्पियन जर्मनी र मेक्सीकोबीच हुन लागेको हो । फिफा वरियताको पहिलो स्थानमा रहेको जर्मनीले १५ औं स्थानमा रहेको मेक्सीकोसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो । यो खेल नेपाली समयअनुसार ८ः ४५ मा सुरु हुनेछ ।
विश्वकपमा आज ३ खेल हुँदै, कुन खेल कति बजे ?
काठमाडौं । रुसमा जारी विश्वकपको चौथो दिन आज ३ खेलहरु हुँदैछन् । आज विश्वकपको समूह ‘ई’ को दुई तथा समूह ‘एफ’ को एक खेल हुन लागेको हो ।
विश्वकपको टिकटको मूल्य कति ?
काठमाडौं । रसिया विश्वकपका खेलहरु आजबाट सुरु हुँदैछन् । रसिया विश्वकपका टिकटलाई विभिन्न ४ वर्गमा विभाजन गरिएको छ । दोस्रो समूह चरणको खेलको लागि टिकटको मूल्य ७९ पाउण्ड स्टर्लिङबाट सुरु हुन्छ ।
काठमाडौं । आज नेपाली समयअनुसार सवा ८ बजेबाट रसिया विश्वकपको उद्घाटन सत्र सुरु हुनेछ । आजको उद्घाटन सत्र मस्कोस्थित लुज्निकी रंगशालामा रसिया र साउदी अरेबियाबीचको खेलअघि चल्नेछ ।